Iindlela ezi-8 kwiTekhnoloji yoThengiso lweSoftware | Martech Zone
Umzi mveliso weentengiso ngumzi mveliso omkhulu oqhuba imisebenzi emininzi kunye nemisebenzi. Kule posi, siza kuxoxa ngeendlela eziphambili kwisoftware yokuthengisa. Ngaphandle kokulinda kakhulu, masihambe siye kwiindlela.
Izinketho zokuhlawula -Izipaji zedijithali kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhlawula zongeza ukuguquguquka kweentlawulo ezenziwa kwi-Intanethi. Abathengisi bafumana indlela elula kodwa ekhuselekileyo yokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Kwiindlela zesiko, kuphela yimali evunyelweyo njengendlela yokubhatala eyadala ubunzima obukhulu bokugcina, kamva ukusetyenziswa kwamakhadi etyala kunye namakhadi etyala aqala ngokulula kodwa inkqubo yamanyathelo amaninzi kunye nokuchitha ixesha. Ngamaxesha anamhlanje zonke iibhulorho ziye zawela kwaye abantu sele beqalisile ukukhetha izipaji zedijithali ukugcina imali kunye nokwenza intlawulo. Olu ncedo lokukhawulezisa iintlawulo zabathengi kwaye ngaxeshanye, abathengisi bafumana izibonelelo zemirhumo esezantsi yentengiselwano.
UkuQaphela uLuntu -Abathengi bahlala bexhalabile malunga nezinto zentlalo, kunye nokwazisa okwenziwa yinkampani. Abathengisi bahlala phantsi koxinzelelo lokwenza imisebenzi ye-eco-friendly. Iiyunithi zeshishini zithathe isigqibo sokunciphisa ukusetyenziswa kweplastiki, iikhemikhali, uboya, uboya, nokunye okuninzi ukuze uhlale ulungile. Amashishini amaninzi akhetha ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ukunceda indalo.
Uhlalutyo lokuQikelela Umzi mveliso weentengiso usebenza ngobuninzi beenkcukacha kwaye uqhutywa yidatha. Idatha eqikelelweyo yexesha elizayo inokunceda amashishini ukuba enze izigqibo ezikrelekrele kwaye ahlalutye iindawo ezahlukeneyo ezinje ngokuthengwa kwezinto kunye neengxelo, indlela yokuziphatha yabathengi, imikhwa, kunye nohlalutyo lohambo lwabo. Iipateni zokuziphatha kwabaxumi kunye nemisebenzi inokunceda ukunciphisa iimveliso ezingathengwanga kunye nokunyusa ezinye iintengiso ngokujonga ukhetho lomdla kunye nomdla wakhe. Iipateni zezaphulelo zababoneleli nazo zinokuqondwa kwaye ukuthengwa kunokwenziwa ngokufanelekileyo ukufumana esona sibonelelo silungileyo.
Izicelo zewebhu -Ukuqonda indawo okusekwe kuyo kwisikhangeli akufuneki ukhuphelo lwesicelo esiselfowuni kwaye sisisombululo esikhulu njengoko zibonelela uluhlu olupheleleyo lwezibonelelo ezinje ngokuhlaziya ngokulula, inkxaso efanayo yesiseko, isikhokelo esinobuhlobo, esiphendula kakhulu, asifuni umgangatho ophezulu intanethi, nganye nganye isetyenziswa ngokulula ziinjini yokukhangela kwaye ikwaxhasa izaziso.
Kukubhadla okungeyonyani -Imiyalezo ebalaseleyo kunye neerobhothi zinceda amashishini ngokugcina yonke idatha yezemali kwaye ezi nkqubo ziyakwazi ukubonelela ngezincomo ezizezakho, ukufumana iimveliso ezichanekileyo, ukuhamba ngokulula, ukuthanda abathengi, nokunye okuninzi.
Uncedo ngelizwi -Abasebenzisi basebenzisa abancedisi belizwi kuhambo lwabo lokuthenga kwi-Intanethi ngeAmazon Alexa, ikhaya likaGoogle, uSiri kunye nabanye abaninzi njengamaqabane eemoto kunye nabancedisi basekhaya. Abathengisi bakhetha ukungena kule teknoloji kunye nokukhangela kwelizwi okusekwe kwintengiso. Abancedisi belizwi bahlala bethembekile kuba bayakhawuleza kwaye bafikeleleka ngokulula kwindlela yokusebenza engenazandla. Oku kuza nokusikelwa umda kobunzima kwisiphumo sophando, ukubrawuza okunzima ngenxa yoluhlu olukhulu lweziphumo zophando kunye nezinye ezimbalwa.
Ukulandelwa kwempahla - Abathengisi bahlala befuna ukulawula imisebenzi emininzi kunye kwaye bafuna izixhobo zolawulo kunye neempawu ezingakumbi zokulawula kunye nokugcina ukulandelela uluhlu lweempahla. Iimpawu zamva nje ezikhoyo kwisoftware yokuthengisa zibandakanya ukuhanjiswa okuzenzekelayo, iinkqubo zolawulo, ukuqikelela ukuthengisa, ukufumanisa into yesitokhwe, uhlalutyo lwexesha langempela, nokunye okuninzi. Zonke ezi zinto zinokunceda ukunciphisa umthwalo omninzi wabathengisi ngokulawula izinto ezininzi ezenziwa kwi-Intanethi.
Ukukhangela okubonakalayo - Ukukhangela okubonwayo lelinye lamashishini ahamba phambili okwaziswe kumaxesha akutshanje. Ukukhangela okubonakalayo kuvumela abasebenzisi ukuba bafumane ngokulula iimveliso ekudala bazifuna. Oku kusondeza abasebenzisi ekuthengeni njengoko iziphumo zophando zihambelana ngokugqibeleleyo neemfuno zabo.
Ezi ibizezimbalwa zeendlela eziphambili kwisoftware yokuthengisa kunye notshintsho kwitekhnoloji kunye nohlaziyo, iindlela ezininzi ziyaqhubeka zongezwa kumzi mveliso. Uluhlu lweetekhnoloji zesoftware ekumgangatho ophezulu kunye nenqanaba, jonga iTechimply.
tags: izicelo ezisekwe kwisikhangeliukulandelwa kwempahlaiindlela zokuhlawulaUhlalutyo oluqikelelweyoIvenkileIvenkile ye-aiisoftware yokuthengisaIintengiso zesoftwareIntsingiselo yetekhnoloji yokuthengisaiindlela zentengisoukuqonda koluntuuphendlo olubonakalayoUncedo lwelizwiizicelo zewebhu